Nchịkọta Google na-enweta ihu mkparịta ụka mara mma (Beta) | Martech Zone
Tuesday, May 8, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Naanị m nwetara ederede na igbe m na ihe ijuanya dị egwu mgbe m mepere Google Analytics. Ha nwere interface beta nke na-akọ akụkọ dị ndụ. Ikwu eziokwu, amalitere m inwe mmasị Clicky n'ihi oke akụkọ. Nke a nwere ike ime ka m jigide Google, n'agbanyeghị!
Nke a bụ njikọ na Njegharị Ngwaahịa maka akụkọ Google Analytics Beta ọhụrụ.
Mee 9, 2007 na 3: 47 PM
Ana m atụ anya ịhụ nke a na arụmọrụ mgbe akaụntụ m gbanwere na nsụgharị ọhụrụ. Ọ na-adị ka ọ dị mma n’anya.
Ekwenyesiri m ike na ị gaghị agbanye mmiri Clicky, naanị cheta hyperlinks ndị ahụ dị mfe nke na-akpọrọ gị gaa ebe onye ọbịa si, na ntinye Feedburner
Mee 9, 2007 na 4: 23 PM
Ana m eji Clicky site na Performancing.com. Enwere m mmasị na ya ruo ugbu a, enwetara m otu afọ n'efu maka ọrụ adịchaghị maka nyochaa ha na blọọgụ m. M na-eche ma ọ bụrụ na Google amalite inwe nchekasị n'ihi ọrụ Stat niile na-apụta na ọ dị mma nke ukwuu ma ọ dịkarịrị mfe ịrụ ọrụ.
Mee 9, 2007 na 6: 34 PM
Nke a dị oke mma .. kedu mgbe ha ga - ewepụ ya n'agbanyeghị?
Mee 9, 2007 na 6: 56 PM
Enweela m enweta ya na akaụntụ m Everyday. M na a na-agba ọsọ a ton nke akụkọ na ya na m nnọọ masịrị! Ọ bụ adịghị na akaụntụ gị?
Mee 10, 2007 na 2: 31 AM
A na-eji nwayọọ nwayọọ ewepụta ọhụụ ọhụrụ n'ime izu ole na ole sochirinụ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla anaghị ahụ ọhụụ ọhụrụ ma ị kwesịrị ime n'oge na-adịghị anya.